FANONDRANANA SOKATRA :: Naiditra eny Antanimora ihany koa ireo Malezianina roa lahy • AoRaha
FANONDRANANA SOKATRA Naiditra eny Antanimora ihany koa ireo Malezianina roa lahy
«Raha vao fikasana hanondrana harem-pirenena dia tsy maintsy miditra eny amin’ny fonjan’ Antanimora avy hatrany », araka ny navalin’ny teo anivon’ny Fampanoavana eny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo momba ny fanontaniana ny tohin’ny raharaha nahavoasambotra Malezianina roa lahy, teny amin’ny seranana Ivato, tamin’ny sabotsy 23 jona lasa teo.
Tamin’ny alarobia 27 jona lasa no natolotra ny Fitsarana izy roa lahy ireo, izay nahatrarana sokatra roa amby roapolo. Tsy tahotra tsy henatra fa nataon’izy ireo tao anatin’ ny valiziny ireo zana-tsokatra raha izy ireo nikasa ho any Afrika Atsimo. Rehefa hitan’ny fitarafana fa mampiahiahy ireo valizy dia niroso tamin’ny fisavana azy ireo ny mpiasan’ny Fadintseranana. Teo no nahitana ireo sokatra.
Tao anatin’ny herinandro izany izay dia teratany vahiny efatra no naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora. Ny roa vavy voalohany dia Bôlivianina sy Brezilianina izay samy nahatrarana vovo-drongony na “cocaïne” teny Ivato. Vao tamin’ny 11 jona lasa teo ihany koa dia nisy Maorisianina telo lahy naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy. Voarohirohy tamin’ny fahatrarana vovo-drongony na “héroïne” milanja 140 kilao indray izy ireo.
FIFANDONANA MAHERY VAIKA :: Olona dimy namoy ny ainy voatifitra tany Belo Tsiribihina
LONILONY NITERA-DOZA :: Olona fito maty tamin’ny adim-pianakaviana